ကမ္ဘာ့ အပြေးမြန်ဆုံး ဘောလုံးသမား (၁၀) ဦးမှာ မက်ဆီ နဲ့ ရော်နယ်ဒို မပါဘဲအမ်ဘာပေ အပြေးမြန်ဆုံး ဖြစ်၊ – MySport Myanmar
ကမ္ဘာ့ အပြေးမြန်ဆုံး ဘောလုံးသမား (၁၀) ဦးမှာ မက်ဆီ နဲ့ ရော်နယ်ဒို မပါဘဲအမ်ဘာပေ အပြေးမြန်ဆုံး ဖြစ်၊
ပြင်သစ်နိုင်ငံ အခြေစိုက် Le Figaro သတင်းက ကမ္ဘာ့ အပြေး အမြန်ဆုံး ဘောလုံး ကစားသမား (၁၀) ဦးကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာမှာ ပြင်သစ် လက်ရွေးစင် အသင်း နဲ့ ပီအက်စ်ဂျီ အသင်း တိုက်စစ်မှူး အမ်ဘာပေက ကမ္ဘာ့ အပြေး မြန်ဆုံး ကစားသမား အဖြစ် ဖော်ပြခံလိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ အပြေး အမြန်ဆုံး ဘောလုံး ကစားသမား (၁၀) ဦးဟာ အများအားဖြင့် လူငယ် ဘောလုံး ကစားသမားတွေ များပြီး ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံးလို့ သတ်မှတ်ခံနေရတဲ့ ဘာစီလိုနာ တိုက်စစ်မှူး မက်ဆီ နဲ့ ဂျုဗင်တပ် တိုက်စစ်မှူး နေရာ်နယ်ဒိုတို့ကတော့ မပါဝင်လာနိုင်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ အပြေးအမြန်ဆုံး ကစားသမား (၁၀) ဦးမှာ ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ပွဲက ကစားသမား (၄) ဦး ပါဝင်ပြီး သူတို့ (၄) ဦးကတော့ အာဆင်နယ် တိုက်စစ်မှူး အူဘားမိယန်း၊ မန်စီးတီး နောက်ခံလူ ကိုင်လီ ဝေါလ်ကာ နဲ့ တောင်ပံလူ ဆာနေး နဲ့ လီဗာပူးလ် တိုက်စစ်မှူး ဆာလတ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ အပြေးအမြန်ဆုံး ကစားသမား (၁၀) ဦးစာရင်းမှာ အီတလီ စီးရီးအေ ပြိုင်ပွဲက ကစားသမား (၁) ဦးမှ မပါဝင်ခဲ့ကြဘဲ ဂျာမနီ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ ပြိုင်ပွဲက ကစားသမား (၃) ဦး၊ ပြင်သစ် လီးဂူးဝမ်း ပြိုင်ပွဲက ကစားသမား (၁) ဦး နဲ့ စပိန် လာလီဂါ ပြိုင်ပွဲက ကစားသမား (၂) ဦး ဖြစ်ကြပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ အပြေး အမြန်ဆုံး ကစားသမား (၁၀) ဦးကို တစ်နာရီမှာ ဘယ်လောက် ကီလိုမီတာ (Km) ပြေးနိုင်တာလဲ ဆိုတာကို တိုင်းတာ ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး လီးဂူးဝမ်း ပြိုင်ပွဲက ပီအက်စ်ဂျီ တိုက်စစ်မှူး အမ်ဘာပေကတော့ တစ်နာရီမှာ (၃၆ ကီလိုမီတာ) နဲ့ အပြေး အမြန်ဆုံးသူ ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ပီအက်စ်ဂျီ တိုက်စစ်မှူး ကိုင်လီ အမ်ဘာပေဟာ အသက် (၂၁) နှစ်အရွယ်ပဲ ရှိသေးပေမဲ့လည်း လူငယ် ကစားသမားတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံး ကစားသမား အဖြစ် သတ်မှတ်ခံနေလျက် ရှိပြီး လက်ရှိရာသီမှာ ပြိုင်ပွဲစုံ (၃၃) ပွဲ ကစားထားရာမှာ သွင်းဂိုး (၃၀) ဂိုးအထိ သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ အပြေး အမြန်ဆုံး ကစားသမား (၁၀) ဦး
၁. ကိုင်လီ အမ်ဘာပေ – တစ်နာရီမှာ (၃၆ ကီလိုမီတာ)
၂. အီနာကီ ဝီလီယံစ် – တစ်နာရီမှာ (၃၅.၇ ကီလိုမီတာ)
၃. အူဘားမိယန်း – တစ်နာရီမှာ (၃၅.၅ ကီလိုမီတာ)
၄. ဘယ်လာရီဘီ – တစ်နာရီမှာ (၃၅.၂၇ ကီလိုမီတာ)
၅. ကိုင်လီ ဝေါလ်ကာ – တစ်နာရီမှာ (၃၅.၂၁ ကီလိုမီတာ)
၆. လီယို ဆာနေး – တစ်နာရီမှာ (၃၅.၀၄ ကီလိုမီတာ)
၇. မိုဟာမတ် ဆာလတ် – တစ်နာရီမှာ (၃၅ ကီလိုမီတာ)
၈. ကိုးမန်း – တစ်နာရီမှာ (၃၅ ကီလိုမီတာ)
၉. အိုဒရီယိုဇိုလာ – တစ်နာရီမှာ (၃၄.၉၉ ကီလိုမီတာ)
၁၀. နာချို – တစ်နာရီမှာ (၃၄.၅၂ ကီလိုမီတာ)
MySport Myanmar2020-04-17T21:12:10+06:30April 17th, 2020|Football, News, Premier League|